५ वर्षे जेल सजाय पाएका दीपक मनाङ्गे पहिलाे बैठकमा अनुपस्थित, के भन्छ प्रहरी? | Suvadin !
प्रदेश नम्बर–४ काे प्रदेशसभा बैठक
काेही काठमाडाैं जानेभन्दा हामीलार्इ धेरै जिम्मेवारी छ भन्दै थिए। काेही चाहिँ संसदमा 'डन' पनि अाउने हाेलान्, ज्यान जाेगाउन पाे मुश्किल पर्ने हाे कि भन्दै व्यङ्ग्य गर्दै थिए। ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरे। ६० जनामध्ये ५९ जना प्रदेशसभा सांसद हलमा अाइसकेका थिए। तर, एक जनाकाे कुर्सी खाली नै थियाे। प्रदेशसभाका ६० जना सदस्यमध्ये मनाङ १(ख) बाट निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मगाङ्गेले बैठकमा अाएनन्। उनले शपथ पनि लिएका छैनन्।
Feb 05, 2018 16:49
राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे।
पोखरा, माघ २२ – निर्वाचन जितिसकेपछि सांसदकाे लाेगाे लगाएर संसद भवनभित्र प्रवेश गर्न पाउनु धेरै राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि जीवनमा एउटा महत्वपूर्ण अवसर हाे।
साेमबार बसेकाे प्रदेश नम्बर–४ को ऐतिहासिक प्रथम प्रदेशसभामा उपस्थित सांसदहरुकाे मुखाकृति हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्थ्याे। जनताले संसदमा जानका लागि मत दिएर अनुमाेदन गरिसकेका थिए।
यही सन्दर्भमा पाेखराकाे नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको सभा कक्षमा बिहान ११ बजे शुरू भएकाे बैठकमा पनि सबै सांसदहरू अाइसकेका थिए। काेही यस्ताे अवसर पनि अाउँदाे रहेछ भन्दै थिए।
काेही काठमाडाैं जानेभन्दा हामीलार्इ धेरै जिम्मेवारी छ भन्दै थिए। काेही चाहिँ संसदमा 'डन' पनि अाउने हाेलान्, ज्यान जाेगाउन पाे मुश्किल पर्ने हाे कि भन्दै व्यङ्ग्य गर्दै थिए।
ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरे। ६० जनामध्ये ५९ जना प्रदेशसभा सांसद हलमा अाइसकेका थिए। तर, एक जनाकाे कुर्सी खाली नै थियाे। प्रदेशसभाका ६० जना सदस्यमध्ये मनाङ १(ख) बाट निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मगाङ्गेले बैठकमा अाएनन्। उनले शपथ पनि लिएका छैनन्।
किन गएनन् राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मगाङ्गे?
मनाङ–१ (ख) बाट एमालेकाे अप्रत्यक्ष समर्थनमा प्रदेश सभा सांसद बनेका दीपक मनाङ्गेलार्इ माघ २ गते सर्वाेच्च अदालतले पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ।
कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको सर्वोच्चले मनाङबाट प्रदेश सांसदमा विजयी मनाङ्गेविरुद्ध यो सजाय सुनाएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको सं‌युक्त इजलासले मनाङ्गेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो। यो फैसलासँगै सपथ नै नलिई मनाङ्गेको पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ।
दीपक मनाङ्गेको समूहमाथि वि.सं. २०६१ सालमा अर्का डन चक्रे मिलनलाई तरबार हानेको अभियाेगमा मुद्दा परेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडाैंले मनाङ्गेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनाएकाे छ। गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाएकाे अादेश अदालतले गरेकाे छ।
यस्ताे छ प्रहरीकाे तयारी
सर्वाेच्च अदालतकाे अादेशलगतै भूमिगत भएका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे अहिले कहाँ छन् भन्ने विषयमा प्रहरी पनि जानकारी छैन। तर, गुरुङकाे खाेजी भइरहेकाे कास्की प्रहरीले जनाएकाे छ।
'हामीलार्इ राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेलार्इ पक्राउ गर्न माथिकाे अादेश छ,' कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी अशाेक सिंहले शुभदिनसँग भने, 'गुरुङ अाजकाे संसद बैठकमा अाएनन्, कही अाएकाे थाहा हुना साथ हामी पक्राउ पर्छाैं।'